Shivaraj Online | गफ हानेको होइन, ढुक्क रहुँ मुलुक बन्छः प्रधानमन्त्री ओली - Shivaraj Online गफ हानेको होइन, ढुक्क रहुँ मुलुक बन्छः प्रधानमन्त्री ओली - Shivaraj Online
गफ हानेको होइन, ढुक्क रहुँ मुलुक बन्छः प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब मुलुकमा फेरि आन्दोलन जरुरी नभएको बताउनुभएको छ। सुशासन र स्वच्छता कायम गर्ने भन्दै उहाँले ढुक्क रहन आग्रह समेत गर्नुभएको छ।
आइतबारदेखि बैकल्पिक सिकाइ प्रविधि सुरु भएको अवसरमा शुभकामना सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘म एकमुष्ट भन्न चाहन्छु, जति लड्ने हो यो पुस्ता लड्छ । मुलक बन्छ । अबका दिनमा हाम्रा सन्तानहरु यस मुलकको भाग्यमानी पुस्ता बन्छ भन्ने तपाईँका अभिभावकहरुको भनाइ झुटा सवित हुँदैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुक विग्रँदै पो छ कि ? मेरा अभिभावकको भोटबाट बनेको देशको सरकार कर्तव्यबाट चुक्दैछ कि ? आम सञ्चार माध्यममा देखिने विभिन्न मुलुकहरुमा पोखिएको आक्रोस वा दिक्दारी मेरो मुलकमा दोहोरिने हो कि ? कतिपय विज्ञासु युवाहरुको प्रश्न आफूले सुनेको बताउनुभयो।
अप्ठ्यारोमा दुविधा हुने र त्यसलाई दुर गर्न नेतृत्व चाहिने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘आरोप लगाए जस्तो गफ हानेको होइन । ढुक्क रहुँ मुलुक बन्छ । सुशासन, स्वच्छता कायम हुन्छ ।’